About us - Liaocheng Xinrun Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle Co., Ltd.
Esekwe ngo-1998, i-Shandong Wei Run Industrial Manufacturing Co., Ltd. e-Liaocheng Economic Development Zone, kwiPhondo lase-Shandong, igubungela ummandla we-68956 yeemitha zesikwere kunye nendawo yokwakha yeemitha zesikwere ezingama-39860. Kukho abasebenzi abangama-327, kubandakanywa abasebenzi abangaphezulu kwama-52 nabasebenzi abaqeqeshiweyo. Iiasethi zizonke zii-83 yezigidi ze-yuan kwaye ingeniso yonyaka yokuthengisa iyi-200 yezigidi zeedola.
Isilinda yethu ye-hydraulic isetyenziselwa ukufakwa, ukuhambisa umthwalo, ukuphakamisa iqonga, ilori yokulahla inkunkuma, inqwelo erhuqwayo, itreyila, umvuni kunye noomatshini abaninzi bokwakha. Ngaba wenze njengoko iimfuno zakho kunye drawing.Yamkela OEM kunye ODM.
Inkampani yethu ngumenzi wobuchwephesha kunye nelithumela kwelinye ilizwe elichaphazelekayo kuyilo, uphuhliso kunye nemveliso ye-telescopic kunye nesilinda ye-hydraulic. Amaziko ethu axhotyiswe kakuhle kunye nolawulo olukumgangatho ophezulu kuwo onke amabakala emveliso asenza sikwazi ukuqinisekisa ukoneliseka kwabathengi.
Iimveliso zethu zivela kwezolimo ukuya kwezomatshini nakwimizi-mveliso yonke, iimveliso ziyilelwe ukuhlangabezana neemfuno zabathengi. I-OEM kunye ne-ODM zamkelwe. Umgca wemveliso uphuhlisiwe kuba siyasiqonda isidingo sokwenza umsebenzi kunye nokuqina.
singabona baboneleli baphambili bokuvelisa i-automobil yasekhaya njenge China Zhongqi, Shanxi Zhongqi, FAW, Hongta, Chongqing Changan, njl. Iimveliso zethu zithunyelwa e-USA, eRashiya, ePoland, eVietnam, e-Itali, eUkraine, eRomania, e-Australia, eCanada, eMzantsi Korea, eMalaysia nakwamanye amazwe nakwimimandla. Kwaye zamkelwe ngokubanzi kumgangatho ophezulu kunye nokuthembeka. Inkampani iseke inkqubo yenkonzo yomsebenzisi egqibeleleyo, ebonelela ngokwoneliseka kunye nangexesha lokuthengisa kwangaphambili, ukuthengisa kunye nenkonzo emva kwentengiso. Shandong Wei Run Industrial Manufacturing Co., Ltd. sinethemba lokujoyina izandla kunye nawe, kunye nenkqubela phambili kunye nokuxhamla kunye nophuhliso oluqhelekileyo!
Ukuba unomdla kuyo nayiphi na imveliso yethu okanye ungathanda ukuxoxa ngomyalelo wesiko, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi. Sijonge phambili ekwenzeni ubudlelwane obunempumelelo kwezoshishino kunye nabathengi abatsha kwihlabathi liphela kungekudala.